Zobumba onodoli bezilokhu umona kanye nenkanuko hhayi kuphela abaqoqi abanolwazi, kodwa futhi abantu abavamile. Ngemva unodoli zobumba endlini - uphawu ukuceba, sokuhlonishwa kanye ukhetho ezithile. Ngakho cabanga ngoba lokhu unodoli kungenzeka kuphela uhlobo olulodwa akhona onodoli ukuthi injongo edidayo ukuze. Ngakolunye uhlangothi, unodoli zobumba yake ithoyizi kwengane. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngandlela-thile elahlekile lo msebenzi walo futhi kancane kancane bathuthela le kwakudala ocucuzayo, nokuqoaiwe futhi izesekeli ingaphakathi. Namuhla zobumba unodoli - ubuye "ithoyizi", kodwa ezimweni eziningi abantu abadala kuphela.
Kuphi futhi nini dolls uqala ukuvela
Zobumba unodoli, omlando wakhe waqala maphakathi nekhulu XVIII, labonakala okokuqala eYurophu, okungukuthi emazweni ezinjenge-Italy, eFrance naseJalimane. Kwamakhophi okuqala bazalelwa 1730. 2 Emakhulwini eminyaka alandela babe inkathi ukuchuma zasakazekela kulo lonke izwe fashion ukuba amathoyizi ezinjalo. ukukhiqizwa Peak (uma mina bangase basho kanjalo, ngoba doll wokuqala owenziwe ngesandla) iphutha esikhathini kusuka 1750 kuya 1930. Zobumba unodoli le minyaka manje kubhekwe kwakudala ezibalulekile.
Distribution zomhlaba ngobumba onodoli
I abazibophezele ngenkuthalo onodoli amakhosi French nesiJalimane. Ngamunye wabo ekuqaleni wenza kuphela ngesandla futhi kanjalo okukhethekile. Kodwa-ke, ukuze kuhlangatshezwane nesidingo, doll eseqala ukuveza indlela yezimboni. Kodwa ngisho nalokhu akuzange kusho ukuphuca la ubuhle charm esingokwemvelo. Lab 'onodoli babé ithoyizi izingane ezivela emazweni amaningi, futhi abadala babethenga kubo amaqoqo zabo. French kanye onodoli German wajabulela sisikhulu, futhi kwakwaziwa ngalé kwemingcele yezwe lenkaba yawo. Puppet master kusukela France hit okudaliwe zabo, ethula nabo i okunethezeka ifenisha ezibizayo. nozakwethu German okungenzeka ukuthi unakho ngale ndaba kwakufanele esivaliwe ngaphezulu, kodwa amandla, nokwethenjelwa izinga ezinhle onodoli babo amakhasimende ezingaphezu kuka engenasizotha okunethezeka French.
Ngobumba onodoli senzeka popularization izingubo fashion kanye izesekeli emphakathini. Kwakukhona ezinjalo, okuyinto, ngaphandle omunye umhlobiso, wenze nezilandiso nakakhulu, kanye izimonyo kanye nezinye imihlobiso. onodoli Ikakhulukazi imfashini kanye ethandwa babe, ahlome "isipho" lonke: izikhwebu nabo kwaba indlu unodoli nge ifenisha, izitsha, ikhabethe esikhiphekayo, izimonyo, izambulela, izikhwama, njll Ngaphezu kwalokho, lezi zinto ayefana Okuyınqo, kuphela usayizi encane kakhulu .. . A ingubo kusukela ikhabethe ka ngokuqinile nefomethi imfashini kahle leyo minyaka. Ngaphezu kwalokho, unodoli igqoka zazihluke kakhulu: I-amabhola, kwasemini kanye dinner, ngisho yokwamukela - ngamafuphi, ngoba zonke izikhathi. Wona "uwayehlalise" anatomically Akumangalisi okwenenekazi yangempela: zobumba kukuvumela ukudala izici okungokwemvelo ngokuphelele ebusweni, nihlobise impahla Kwakungenzima. Umthelela ukuthi iyakhula ngemehlo onodoli: abenziwe ngengilazi. Futhi zonke yilezozintombi bahlukile, njengoba umbala iris is okuphindiwe.
Dolls isipho babe amathoyizi hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa izingane ezivela emikhayeni ekhomba ngophakathi. Ngokuvamile abazali noma abantu engenabantwana wathenga unodoli izindlu ngokwabo. Ngasekupheleni kwawo-XVIII futhi ekuqaleni XIX eminyaka lesi simanga sekuwumkhuba kakhulu eRussia. Yikuphi elizoba isiqinisekiso yokuthi zobumba onodoli eMoscow babe abameleli abaningi abadumile yezikhulu, abathengisi nongqondongqondo. Abo ke babengabokulinga ikakhulukazi amadoda. Namuhla, isidingo zobumba unodoli emuva. Njengoba ngaphambili, ezazaziswa ngezandla futhi naturalism yesithombe. izimo ezinjalo ngezinye izikhathi izinkulungwane zamaRandi. Kodwa kukhona onodoli engabizi. Kungakhathaliseki intengo, bayoba njalo kungaba isipho ephelele noma umhlobiso wezangaphakathi.